Seychelles waxay bedeshay xayiraadaha safarka ee Hindiya, Pakistan iyo Bangladesh | Wararka Gudiga Dalxiiska Afrika
Bogga ugu weyn » posts » Wararka Gudiga Dalxiiska Afrika » Seychelles waxay bedeshay xayiraadaha safarka ee Hindiya, Pakistan iyo Bangladesh
Wararka Gudiga Dalxiiska Afrika • Wararka safarka Bangladesh • Jebinta Wararka Safarka • Arimaha Dowlada • Caafimaadka Warka • Wararka Safarka Hindiya • Wararka Booqashada Caalamiga ah • kale • Wararka safarka Pakistan • Dad war samaynaya • Ammaanka • Seychelles wararka safarka • Wararka Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka
Seychelles waxay bedeshay xayiraadaha safarka ee Hindiya, Pakistan iyo Bangladesh
Hay'adda Caafimaadka Dadweynaha ee Seychelles waxay ku dhawaaqaysaa tallaabooyin cusub oo socdaal
Seychelles ayaa ku dhawaaqday talaabooyin cusub oo dhanka safarka ah Talaadada, Abriil 20, 2021, kadib markii ay ku soo bateen dalal dhowr ah.
Saameyn deg deg ah, booqdayaasha India, Pakistan, iyo Bangladesh ee u safraya Seychelles waa in la tallaalaa.
Socotada waxaa loo ogolaan doonaa oo keliya gelitaanka kadib markay qaataan labadooda qaadasho, uguyaraanna laba toddobaad ayaa dhafay kadib qiyaastooda ugu dambeysa.
Nuqul ka mid ah shahaadada waa in la soo bandhigaa markii aad codsaneyso Ruqsadda Safarka Caafimaadka (HTA) ee www.seychelles.govtas.com.
Oggolaanshaha safarku waa qasab safarka Seychelles waxaana weydiisan doonta shirkadda duulimaadka goobta soo-galista; martida looma oggolaan doono inay raacaan duulimaad haddii kale.
Shahaadooyinka tallaalka waxaa lagu soo rogi karaa xaqiijin iyo oggolaansho Hay'adda Caafimaadka Dadweynaha markay dalka soo galaan.
Intaa waxaa sii dheer, Brazil ayaa hadda lagu daray liiska dalalka aan hadda loo oggolaan inay u safraan Seychelles, oo ay weheliyaan Koonfur Afrika. Si kastaba ha noqotee, liiskan ayaa weli lagu soo rogay dib-u-eegis maadaama heerka infakshanka adduunka uu isbeddelayo.
Booqdayaasha waxaa la xasuusinayaa inay qasab tahay inay wada leeyihiin caymiska caafimaadka safarka oo ansax ah si ay u daboosho qarashyada la xiriira COVID-19, ee dhacay intii ay joogeen Seychelles.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan safarka Seychelles, booqo www.advisory.seychelles.travel